जुवा खेल्न नमान्दा व्यापारीले स्थानीयलाई कुटे - नागरिक रैबार
जुवा खेल्न नमान्दा व्यापारीले स्थानीयलाई कुटे
शुक्रबार, अशोज २२, २०७८
धनगढीः बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिकामा एक पुरुषमाथि निर्घात कुटपिट भएको छ। डिलाशैनी-१ का ५७ वर्षीय अकबर रानामाथि स्थानीय व्यापारी महाबिर धामीले निर्घात कुटपिट गरेका हुन्।
रातको समयमा मदिरा सेवन गरेका धामीले जुवा खेल्न नमान्दा रानामाथी कुटपिट गरेको पीडित रानाका छोरा महेश रानाले जानकारी दिए। रानालाई घरबाट आफ्नो पसलमा लगेर कुटपिट गरिएको उनले बताए।
कुटपिटबाट रानाको टाउको, नाक, मुख र आँखामा चोट लागेको छ। घटनाका विषयमा प्रहरीलाई खबर गरेपछि प्रहरीले दुवै पक्षलाई सिमार प्रहरीचौकीमा बोलाएको छ।
बाजुरामा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा कसका कति मत ? हेर्नस्
निजामती विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत
उपप्रमुख महिला भएकै कारण बदनाम गरियो : बडीमालिका नगरपालिका
एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा जाँदै भानुभक्त जोशी !
बाजुराकी युवती पोखरामा मृत फेला
बुढीगंगा ९ मा समाजवादीको वडा कमिटी गठन,अध्यक्षमा भरत शाह
काँग्रेस अधिवेशन : ३ सय मतगणना गर्दा कसको कति (हेर्नुस्)
बाजुरामा राँगा जुधाएर वडा दशैंको शुभारम्भ गरिदै
३ सय ९१ जनामा कोरोना संक्रमण, ६ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ३ सय ९१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ८ हजार ७७ जनामा कोरोना परीक्षण गरिएकोमा ३९१ जना नयाँ सक्रमित भेटिएका हुन् । सोही समयमा ६८० जना कोरोना मुक्त भएका छन् । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै हाल […]
विप्लव र प्रकाण्डले बोके वीरजङ्गको शव
काठमाडौं, ३१ असोज । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका दाजु वीरजङ्गको अन्त्येष्टि भएको छ । उनको कपिलवस्तुस्थित आफ्नै गाउँमा अन्त्येष्टि भएको हो । वीरजङ्गको मृत्यु उपचारका क्रममा भारतको म्याक्स अस्पतालमा भएको थियो । २८ असोजमा निधन भएका उनको शव स्वदेश ल्याई हिजो अन्त्येष्टि गरिएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता समेत रहेका वीरजङ्गको […]
सुदूरपश्चिममा धान उत्पादन बढ्ने
धनगढी : दसैँको टीका लगाइसकेका सुदूरपश्चिमका किसानलाई अहिले धान भित्र्याउन भ्याइनभ्याई छ। खेतमा धान पाकेका कारण पानी परे नोक्सानी हुने डरले किसानलाई धान भित्र्याउन भ्याइनभ्याई भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो वर्ष धानको उत्पादन राम्रो हुने अनुमान गरिएको छ। यो वर्ष मनसुन अनुकुल हुनुका साथै उन्नत बीउका कारण धान उत्पादन बढ्ने अनुमान कृषि विज्ञले गरेका हुन्। […]
एकीकृत समाजवादीले तोक्यो ३३५ नेताको जिम्मेवारी, कुन पदमा को ?
काठमाडौं। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पार्टीले ३३५ नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको छ। पार्टीको असोज ५-७ मा केन्द्रीय कमिटीको प्रथम बैठक र २०७८ असोज २१ मा बसेको स्थायी कमिटीको सातौं बैठकले नेताहरूको कार्यभार र जिम्मेवारी विभाजन समेत टुंगो लगाएको हो। जसअनुसार अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको समग्र नेतृत्व, संघीय संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी दिइएको छ भने सम्मानित नेता झलनाथ […]
काठमाडौँ: भारतको आन्ध्र प्रदेश तथा ओडिसाको तटीय क्षेत्र आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणाली र विकसित हुँदै गरेको पश्चिमी वायु प्रणालीको संयुक्त प्रभावले नेपालमा बदली र वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार शनिबार (हिजो) अपराह्नदेखि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई धेरैजसो स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम र केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरीसहित भारी वर्षाको समेत […]
बाजुराकी एक किसोरी भारतमा बेपत्ता
नागरिक रैबार/बाजुरा ३० असोज। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका ३ बसालीकी १५ वर्षिया किसोरी पुजा कुमारी पाध्याय भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट बेपत्ता भएकि छन् । किसोरी पाध्याय दिल्लीको रतन पारखबाट असोज २४ गतेबाट बेपत्ता भएको बाजुराको बडीमालिका ९ घर भई हाल भारतमा बस्दै आएका गोरख विष्टले बताएका छन् । विष्टका अनुसार बेपत्ता भएकि किसोरीको बुवा धुर्वराजको स-परिवार […]
नेकपा (एस)मा कार्यविभाजन टुंगियो, केन्द्रीय कमिटी ३३५ सदस्यीय [सूची]
सिन्धुपाल्चोकमा बस दुर्घटना हुँदा ३५ जना घाइते
दसैंमा गरिबलाई राहत दिने भनेर सरकारले आश देखायो, तर दिएन
दशैंमा पनि बढेन बक्स अफिसमा चहलपहल